Tan macnaheedu maahan inay ardaydu joogi doonaan teknolojiyadda dhammaan waqtiga oo dhan, laakiin waa inay lahaadaan isku-dheelitir waqti xagga Schoology ah oo ay ka shaqeeyaan shaqooyinka la siinayo iyada oo aan lahayn teknolojiyad.
Arimaha Kale ee Farsamada
Waa maxay waqtiga kama dambeysta ah ee shaqada la dhammeeyay maalinta e-barashada?
Waqtiga kama dambeysta ah ee dhameystirka shaqada waxaa go'aaminaya oo si cad macallinka u la socodsiin doona. Macallimiintu waxay ardayda siin doonaan waqti ku filan oo ay ku dhammaystiraan shaqooyinka oo laga yaabo inay ka badnaadaan wakhtiga caadiga ah ee lagu bixin doono fasalka.
Sidee culeyska shaqo ee fasalka dhexdiisa loogu wareejinayaa jawiga elektaroonigga ah?
Sidee ardaydu ula xiriiri karaan macalimiinta?
Ardaydu waxay kula xiriiri karaan macalimiinta iyagoo adeegsanaya fariin Schoology ama emayl.
Dugsiga Dhexe West /